Computer ပေါ်က Icon တွေမှာမြန်မာလိုရေးဖို. - .::just for share::.
Home » နည်းလမ်းများ » Computer ပေါ်က Icon တွေမှာမြန်မာလိုရေးဖို.
မင်္ဂလာပါဗျာ ဒီနေ.ကျွန်တော်တင်ပေးချင်တာလေးကတော့ မသိသေးသူများအတွက်သာရည်ရွယ်ပါတယ် သိပြီးသားလူတွေအတွက်လွယ်လွယ်လေးပါ ဒါပေမဲ့ facebook မှ ညီမတစ်ယောက်တောင်းဆိုထားလို. လုပ်ပြရင်းနဲ.videoဖိုင်လေးပါတစ်ခါထဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို.တချို.ကွန်ပြူတာတွေပေါ်မှာ floder တွေမှာမြန်မာနာမည်လေး တွေနဲ.ပေးထားတာမြင်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ် အဲ့လိုလေးတွေကို မိမိတို. ကွန်ပြူတာပေါ်မှာ လဲမြင်ချင်ရင် ဘာဆော့ဝဲလ်မှသွင်းပေးစရာမလိုပါဘူး windows မှာပါတဲ့ default settings ကိုနည်းနည်းပြင်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ အခုကျွန်တော်ပြောပြတာ မရှင်းရင် အောက်မှာတင်ပေး ထားတဲ့ video ဖိုင်လေးမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ် အရင်ဆုံးကွန်ပြူတာမှာပုံမှန်သုံးနေကျဖြစ်တဲ့ zawgyi-one fount သွင်းပြီးသားဖြစ်ရပါမယ် ဒါကတော့ စက်တိုင်းမှာရှိပြီးသားဖြစ်လို.ပြောစရာမလိုလောက်တော့ပါဘူး ပထမဆုံး Desktop ပေါ်မှာ Right Click >>Personalize>>Window Colour ကိုဝင်ပါမယ် အိုကေ ပြီး ရင်တော့ Item ကိုရှာပါ အိုကေ အဲ့မှာ desktop ဖြစ်နေတာကို Icon ဆိုပြီးပြောင်းပေးလိုက်ပါ ပြီးရင်တော့ အောက်က font နေရာမှာ default ပါတာကို zawgyi-one ပြောင်းပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ Apply ပြီးရင် Ok နှိပ်ပါ ဒါဆိုရင် အိုကေပါပြီ New Floder တစ်ခုဆောက်ပြီးမြန်မာလိုနာမည်လေးပေးကြည်.လိုက်ပါ မရှင်းသေးဘူးဆိုရင်တော့ အောက်မှာပေးထားတဲ့ video လေးကိုကြည်.လိုက်ပါ အဆင်ပြေသွားပါမယ် အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေဗျာာာာာာာ.....................................................(မြန်မာပြည်လူငယ်)